Madaxweyne Xasan Sheekh oo Jabiyay Iskoor aysan sameyn Madaxweynayaashii ka horeeyay 40-Sano kadib !! | Somali - Diaspora
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Jabiyay Iskoor aysan sameyn Madaxweynayaashii ka horeeyay 40-Sano kadib !!
October 01 2012 – Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Prof Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu heestaa Iskoor u gaar ah 40-sano kadib waxa uuna Noqday Madaxweynihii ugu horeeyay oo mudo 40-sano kadib Dalka lagu doorto hadana isaga oon Dibada aadan Booqasho iyo safarkiisa ugu horeeyo ku bilaaba Gudaha Dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaliya Prof Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyey kutegay Maanta Gobolka Bay Magaladiisa Baydhaba,
Waxaana qormadeena kujeex-jeexaynaa muxuu uga dhigan yahay madaxweyne Hassan Shekh safarka sidaan oo kale ah?, jawaabtuna waxay noqonaysaa Marlabaad ayuu helay guul kale oo aan cidina lawadaagin isagoo horey u haystay guul qiimo badan , taas oo ahayd inuu yahay madaxweynihii ay doorteen Baarlamaan soomaliya gudaheeda lagu doortay.
Safarkuna wuxuu noqonayaa safarkii Madaxweyne aan dalkiisa dibada uga bixin balse booqda gudaha dalka, Madaxweyne Hassan sheekh hadii uu safarkiisa gaarsiin lahaa Magaalooyinka Hargaysa, iyo Boorame isagoon kaboodayn Boosaaso, iyo bartamaha Soomalia wuxuu noqon lahaa mid taariikkhda baaldahab ah kagala ,ogow arintu geesinimo ayey rabtaa, lugtaada iyo gacantaadaba gaarsii jamhuuriyadda federaalka ahb intaad tegi lahayd Adisababa iyo Nayrobi walow xiligaan awqtigadu yaryahay, safarka guduhu wuxuu wax kabedeli karaa xitaa kooxaha diidan dawladnimada.
Waa markii ugu horeysay ee madaxweyne dalka lagu doortay uu safar dalka gudihiisa ah kukala bixiyo gobolo kala duwan, waxaan ognahay inaad kusafrayso Gaadiid shisheeye ayna ku ilaalinayaan ciidamo shisheeye , ayna kusoo dhawaynayaan kuwo kale dhibsa maleh waa arimo ay duruuftu keentay.
Sanadka labaad ee madaxtinimadaada waxaan kuu rajaynaynaa inaad kusafarto gaadiid soomaaliyeed ayna ku dhinac joogaan ciidan soomaliyeed.
Waxaana filayaa in dalkaaga burburkiisa aad indhaha kuqabato waa muhiim intaad saraha dhaadheer ee muraayadaha kasmaysan kunayaal caro shisheeye aad fiirsan lahayd,shido faynuustaada adigoo baydhabo kuhoyda waxay ka kaqiimo badan tahay adigoo Hotel hilton kaseexda sariiraha wareegaya,
Safarka waxaa qiimo uyeelaya xiliga uu dhacayo iyo goobaha uu kadhacayo, walow ay ahaan lahayd mid xiiso gaar ah leh inaad safarka kutagto magaaladii aad kudhalatay.
Waxaa nasoo gaartay in Qorshahaagu kujirto in aad Hiiraan tagto, Safarka Hiiraan wuxuu kuxasuusin doonaa in weli jalalaqsi ay kujirto gacanta Alshabaab dadka reer beledweyne waxay si gaar ah ugu farxi doonaan imaanshaha Madaxweyne soomaliyed kuna dhahay hiiraan.
Iskusoo wadaduuboo qormadan waxaan uu magacdarnay safarkii qiimaha badnaa waxayna kumutaysatay sababo badan oo aan korkusoo sheegnay waxaana Madaxwenaha xasuusinayaa inuusan dalkiisa,iyo dadkiisa kala jeclaysan,una dulqaato kuwa samirka yar leh welibana uu iyaga kuhormariyo wixii ay tabayaan.
waxaana laga yaabaa in akhristayaashu isweydiiyaan waa kuwee kuwa samirka yari? jawaabtuna waa dhulka aan webiyadu marin dadka degan kuwa ugu samirka yar dadka soomaaliyeed.
Cabdiweli Gaas oo lagu qanciyay innuu Boorsooyinkiis XidhXidho Unna Diyaar Garoobo Isbadalka Dalka ka Socda Xukuumadda oo si adag uga hortimid ka qaybgalka afhayeenka baarlamanka ee kulanka Nairobi.